Fanaterana harona misy raozy "Fiderana kely" any Moskoa - Voninkazo famandrihana
Harona misy raozy "Fiderana kely"
Hahavony 25 cm
47 hevitra momba ny asan'ny florist:
Nanafatra voninkazo avy any Belarus aho ho an'ny rahavaviko monina any Moskoa. Tena afa-po izahay, mahitsy, mahitsy. Ny fotoana voalohany nahitako raozy dia nijoro elaela. Mety nijoro nandritra ny telo herinandro. Tena vaovao sy tena tsara tarehy. Raiso izany ary tsy hanenenanao izany.
Fangaro misy hydrangea maro loko (3 pcs) ao anaty boaty.
2700 Fandaminana voninkazo "Ice cream"
Fehezam-boninkazo amin'ny loko volomboasary mamirapiratra misy minigerbera 5, raozy miisa 5, chamomile 8, tulip 9, salalà iray fonosana, taratasy kraft potipotika.
5700 Fehezam-boninkazo "Orange fahavaratra"
Ny felana felam-boninkazo ao anaty boaty satroka dia mety tsara amin'ny fandraisana amin'ny fampakaram-bady na fisakafoanana am-pitiavana.
2350 Felana voninkazo ao anaty boaty satroka
Vata-boaloboka raozy misy feo malefaka, ary koa voaroy: frezy, voaroy, blackberry, ary koa truffles vatomamy frantsay.
8850 Box misy voninkazo, voaroy ary vatomamy "Formula of love"
Composition in a box-heart of spray roses (mavo, mena sy fotsy) 5 pcs, litera sôkôla 4 pcs, macarons 2 pcs, box-heart.
3250 Box misy voninkazo, sôkôla ary makaronona "Neny"
Fehezam-boninkazo 15 peonies, lavender 1 fonosana, salalà 1 fonosana, lagurus maina amin'ny taratasy asa-tanana vita amin'ny ribôna.
9750 Fehezam-boninkazo peonies "Provence"
Harom-boninkazo miloko mavokely peonies 5 pcs, lilac 3 pcs, germini 7 pcs, raozy 11 pcs, eustoma 4 pcs, raozy spray 7 pcs, salal.
13870 Harom-boninkazo "Glamorous"
Harom-boninkazo misy karazana hydrangeas fotsy sy manga 6 pcs, fantsika 6 pcs, germini 10 pcs, matthiola 10 pcs, raozy 10 pcs, raozy famafazana 10 pcs, amoniaka 6 pcs, fonosin'ny kininina, fonosana salal.
16750 Harona misy voninkazo "Lanitra"